China Polyethylene Glycol 6000 Peg6000 mveliso kunye nabenzi | Yinuoxin
I-Polyethylene glycol 6000 ilungiswe yipolymerization ye-ethylene glycol kulwelo kubushushu obuphezulu, uxinzelelo oluphezulu okanye uxinzelelo oluphantsi.
I-Polyethylene glycol 6000 (PEG-6000) Igama lesiNgesi: macrogol 6000-992 le mveliso ngumxube we-ethylene oxide kunye ne-polycondensation yamanzi, ifomula yeemolekyuli yi-CH (CH2CH2O) NH, apho n imele inani le-oxyvinyls.
Le mveliso imhlophe i-wax eqinileyo okanye i-powder granular, i-smelly. Imveliso inyibilika emanzini okanye kwi-ethanol, kodwa ingenakunyibilika kwi-ether. Indawo eqandayo yale mveliso (Isihlomelo VI d) ngama-53 ~ 58 ℃. I-Viscosity ithatha i-25.0g yale mveliso, uyibeke kwibhotile yokulinganisa eyi-100ml, yongeza amanzi ukunyibilika kunye nokuxutywa kwisikali, gungqisa kakuhle, sebenzisa i-viscometer yePinker enobubanzi obungaphakathi be-1.0mm ukumisela ngokomthetho (Isihlomelo VI g indlela 1 ). I-viscosity ye-kinematic kwi-40 ℃ yi-10.5-16.5mm <2> / s.
Inochuku oluncinci kulusu namehlo, kwaye kunzima ukufunxwa sisisu emva kolawulo lomlomo, kwaye ityhefu iphantsi kakhulu. Ukufakwa kwenaliti ye-5% (ubunzima) isisombululo esinamandla se-polyethylene oxide emehlweni emivundla kubangele ukutshiswa okuncinci. I-PEO ayinampembelelo incinci kwinqanaba lokufa kweentlanzi, unonkala, iAnemone, istrimp okanye ulwelwe. I-resin yayo kunye nesisombululo samanzi zinetyhefu ephantsi, kwaye zikhuselekile ukusebenzisa nokuphatha. I-US Food and Drug Administration (i-FDA) ivumile ukuba kusetyenziswe i-resin ye-polyethylene oxide solution solution for a special food packaging and beer directly additives.
Ubungakanani obuqhelekileyo bemolekyuli yale mveliso imalunga ne-12.5g, elinganiswe ngokuchanekileyo. Yibeke kwibhotile engama-250ml enesiciko sokumisa, yongeza i-25ml pyridine, uyitshise ukuze uyinyibilikise, kwaye uyipholise. Ngokwendlela ye-polyethylene glycol 400, ukuqala "kwisisombululo se-pyridine esongezwe nge-phthalic anhydride ngokuchanekileyo", umndilili wobunzima beemolekyuli kufuneka ube yi-5400-7800. Ubumuncu, ukucaca kunye nombala wesisombululo, kunye nentsalela kumlilo ziya kuhlolwa ngokwendlela echazwe kwi-polyethylene glycol 400.
54 ukuya kuma-60
Egqithileyo Polyethylene Glycol 4000 Peg4000
Okulandelayo: Polyethylene Glycol 8000 Peg 8000